दुइ तिहाइको सरकारले सडकमा भएका दुइ तिहाइ खाल्डाखुल्डी कहिले देख्ला ? - सिम्रिक खबर
दुइ तिहाइको सरकारले सडकमा भएका दुइ तिहाइ खाल्डाखुल्डी कहिले देख्ला ?
काठमाण्डौँको बल्खु देखी कालिमाटी सम्म पुग्दै यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि भोगीरहेका छन, कुलेश्वर क्षेत्रको सडकको हरिविजोग ।
मुलुककै सवैभन्दा बढी विकसित र ठुलो व्यापारिक, राजनीतिक तथा हरेक हिसावले अगाडी रहेको राजधानी काठमाण्डौ खराब सडकको मुल्याङ्कनमा पनि अग्रस्थानमै छ । कुलेश्वर क्षेत्रमा करिब २ सय मिटर भित्र २०० बराबर नै खाल्डाखुल्डी छन ।
त्यसैमाथी बर्षा भइरहेको अवस्थामा हिलो र पानीले झन बेहाल अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा यात्रा गर्ने यात्रु, चालक, पैदलयात्री सबैलाइ समस्या भइरहेको छ नै, यसको साथै ट्राफिक जाम बढाउन पनि यसले मद्धत गरिरहेको छ ।
यो त एक प्रतिनिधि मुलक तस्वीर मात्र हो । यो भन्दा कठीन र भयाभह स्थिती बोकेका सडकहरु कैयौँ छन । सडकमा धुलोको त झन कुरै छोडौ । दुइ तिहाइको सरकारले काठमाण्डौमा भएका दुइ तिहाइ खाल्डाखुल्डीको अवस्था कहिले देख्ला ? जनताले प्रश्नको उपस्थिती कहाँ छ ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन ।
तस्वीर : सिम्रिक खबर